देउवालाई पौडेलको प्रश्न: संवैधानिक परिषद्मा किन गयल? :: PahiloPost
देउवालाई पौडेलको प्रश्न: संवैधानिक परिषद्मा किन गयल?
9th April 2019, 07:14 pm | २६ चैत्र २०७५
लमजुङ: नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति पटकपटक संवैधानिक परिषद्मा नजानुको कारण प्रष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्। पछिल्लोपटक संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति बिनै विभिन्न निर्णयहरु गर्दै आएको छ। सभापति देउवाले भने आफ्नो उपस्थितिबिनै निर्णय गरेको भन्दै परिषदको आलोचना गर्दै आएका छन्।
यसै विषयमा वरिष्ठ नेता पौडेलले लमजुङमा पार्टीको जिल्ला सम्मेलनको उदघाटन गर्दै देउवालाई गयल हुनुको कारण मागेका हुन्। सम्मलेनमा पौडेलले प्रश्न गरे, 'संवैधानिक परिषदको बैठकमा पटक पटक पार्टी सभापति तथा विपक्षी दलको नेता किन जानुभएन? यो विषयमा छलफल हुन जरुरी छ।'
नेता पौडेलले संवैधानिक निकायमा एकलौटी हुनु सुखद नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाधिकार गर्न खोजेको आरोप लगाए। संवैधानिक निकाय सरकारलाई ब्यालेन्स गर्ने निकाय भएको तर्क गर्दै उनले एकलौटी गर्नु भनेको अधिनायकवाद भएको बताए। भने, 'अहिले ओली सरकारले विकासमा धरी एकलौटी गरेको छ। कम्युनिष्टहरु नयाँ वर्ग जन्माइरहेका छन्।'
त्यसैगरी पौडेलले महासमितिका निर्णय इमान्दारीताका साथ पूरा गर्नुपर्ने जिकिर गरे।
लमजुङ जिल्लाको प्रशंसा गर्दै उनले भने, 'नेपालको इतिहासमा सामाजिक जागरणको आन्दोलनमा अग्रणी जिल्ला हो। लम्जुङले श्रमको सम्मान गर्ने काम गरेको छ।'
नेता पौडेलले कम्युनिस्टबाट राम्रो कुराको अपेक्षा गर्नु नै गलत भएको दाबी गरे। भने, 'गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री यही जिल्लाको हुँदा लम्जुङलाई केही गर्न सक्नुभएको छैन। लम्जुङमा अनेकौ संभावना छन्। ती संभावनालाई उपयोग गर्न सकेका छैनौ। यो जिल्लामा पर्यटन, कृषि र उर्जा शक्तिको संभावना धेरै छ। सरकार आम नागरिकलाई दिनुपर्ने तीनवटै कुरामा असफल भइसकेको छ। शान्ति सुरक्षा, सुशासन र विकास दिन सकेको छैन।'
त्यसैगरी उनले गाँउमा खानेपानी नभएको बेला कम्युनिस्ट सरकारले कतारमा पानी बेच्ने कुरा गरेर जनतालाई झुक्याइरहेको आरोप लगाए।
देउवालाई पौडेलको प्रश्न: संवैधानिक परिषद्मा किन गयल? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।